Muuri News Network » Midowga Yurub oo Hanjabaad Xasaasi Ujeediyay DF Kuna Tilmaamay in ay…
Midowga Yurub oo Hanjabaad Xasaasi Ujeediyay DF Kuna Tilmaamay in ay…
Midowga Yurub ayaa war kulul ka soo saaray dib u dhaca ku yimid ansixinta nidaamka doorashada Soomaaliya ee 2016, isagoo sheegay in fursad weyn la lumiyay markii Baarlamaanka Soomaaliya ansixin waayay qaabka doorashada maalintii ay Muqdisho tageen safiirada Golaha ammaanka Q/Midoobay.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Midawga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Midawga Yurub uu maalmihii ugu dambeeyay si dhow ula shaqaynayay madaxda dawladda federaalka ah iyo madasha wadatashiga iyo guddiga uu baarlamaanku u xil saaray dib u eegista hanaankii doorashada ee ka soo baxay madasha wadatashiga qaran.
Midowga Yurub ayaa War-saxaafadeedkiisa ku sheegay in horumar la sameeyay, balse haddii si degdeg ah arrintan xal loogu heli waayo ay qasab ku noqon doonto dalalka Midawga Yurub inay ka fiirsadaan taageerada ay u fidiyaan dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana lagu baaqi doono shir caalami ah oo degdeg ah oo la xiriira arrimaha Soomaaliya.
Warka ka soo baxay Midowga Yurub ayaa caddeyn kale u ah sida Beesha Caalamka faraha ugula jirto arrimaha Soomaaliya, iyadoo muddooyinkii ugu danbeeyay cadaadis lagu saarayay Baarlamaanka Soomaaliya inuu si duuduub ah u ansixiyo isagoo aan ka doodin heshiiska doorashada ee ay gaareen madaxda Soomaalida.
KALA SOCO WARAR XAQIIQO KU SALEYSAN